Ny fanoharana ny boky medieval dia velona ankehitriny | Famoronana an-tserasera
Ok izany ireo seho boky tamin'ny vanim-potoana ireo dia maneho zavatra mihoatra noho ilay sehatra ihany. Satria raha raisinao toy ny taloha izy ireo, dia mety hitranga fa tsy dia hafahafa izy ireo. Ary izao no nataon'ity vondrona mpianatra ity, izay nisolo tena azy ireo irery.
Ny hoot rehetra dia ny iray tratra ka ireo boky misy fanoharana manjavozavo ary izany dia mampiseho fa hafahafa toa antsika ankehitriny ireo vanim-potoana medieval ireo. Amin'ny fotoana nanjary ampahany manan-danja tao an-dapa ny vazivazy, dia mbola misalasala ihany isika momba ny anton'ireo sary hosodoko ireo.
Sary tsy amin'antony izay hitantsika amin'ity fanandramana natao ity notontosain'ireto mpianatra avy any Tsekoslovakia ireto maneho ny sary hafahafa indrindra hita ao amin'ny sary tamin'ny taon-jato.
Ireo mpanakanto hafahafa izay manao toy izany naneho ny fifandraisan'ny olombelona tamin'izany fotoana izay nihazakazahan'ny fiangonana malalaka ary ny rafitra feodal dia nanjaka tany amin'ireo firenena eropeana samihafa. Fotoana maizina asehon'ireto tovolahy ireto tsara.
Avy amin'io toetra io milalao lokanga miaraka a nitodika tanteraka ny tovovavy ary fomba fijery inona no tena mahatonga antsika hafahafa maninona. Angamba fomba iray hanehoana mangingina hafatra toy izay hitranga amin'ireo mpanakanto efa niorina izay nitady fomba hanitarana hevitra hatrany.
Mandalo amin'ireto andalana ireto izahay mba hahitana fotoana tony sy fahatokisan-tena kely fotsiny amin'ny inonaary ireo sary tamin'ny vanim-potoana medieval ireo dia tsy mavesatra loatra ary toa noforonina avy amin'ny tontolo hafa izay tsy antsika izy ireo. Ny solontenan'ny fiarahamonina sy ny rafitra izay ahatongavan'ireo mpanonta pirinty taonjato maro taty aoriana ary ny fifandraisana am-bava no hany fomba fizarana hevitra, eritreritra ary kolontsaina; raha afaka ...
Mahalana koa ity fampirantiana ny karan-doha 100 goavambe.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Rehefa mamerina mijery sary avy amin'ny boky medieval ianao ary tsy dia mahagaga loatra izany
Ny sarimiaina manintona sy mampihetsi-po an'i McDonalds